Bogga ugu weyn > Quinone Pyrroloquinoline (PQQ)
Cofttek waa shirkad xirfadle ah oo suuqa ku jirtay ilaa 2012 waxaana lagu yaqaan wax soo saar tayo sare leh. dhamaystirid waa in aysan lahayn gluten-ka oo aysan ku jirin xasaasiyado caadi ah. Sidaa awgeed, dadka u nugul noocyada kala duwan ee xasaasiyadda ayaa qaadan kara kaabadan iyada oo aan lumin xasilloonida maskaxda. kaabista Cofttek PQQ waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican Qufulone-ka Pyrroloquinoline supplements hadda laga heli karo suuqa. Haddii aad raadineyso beddelaad khudradeed, waxaan kugula talineynaa inaad ka iibsato nafaqada PQQ Energy Cofttek.
Pyrroloquinoline Quinone unfadium cusbo FAQ
Waa maxay Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)?
Pyrroloquinoline Quinone ama PQQ waa xarun ka jirta dhirta iyo sidoo kale bakteeriya badan iyo unugyada unugyada, sida khamiirka. PQQ sidoo kale waxay si dabiici ah ugu jirtaa caanaha naaska aadanaha iyo sidoo kale soodhada sokorta leh, kiwi, babayga, isbinaajka, dhir, cagaarka, basbaaska cagaaran iyo shaaha cagaaran. Cilmi baaris lagu sameeyay xayawaanku waxay la xiriirtaa yaraanta PQQ ama yaraanta PQQ oo leh jawaab celin difaac, culeyska koritaanka, waxqabadka taranka aan caadiga ahayn iyo yareynta dabacsanaanta dheef-shiid kiimikaadka.
Sanado badan, cilmi baarayaashu waxay u maleynayeen Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) waa nooc fiitamiin ah. Si kastaba ha noqotee, cilmi baaris la sameeyay dhowrkii sano ee la soo dhaafay ayaa shaaca ka qaaday in Pyrroloquinoline Quinone uu yahay nafaqo leh sifooyin fiitamiin oo kale ah oo awood u leh inuu u dhaqmo sida wada-shaqeyn ama xoojinta enzyme-ka ee hannaanka yareynta-oksijiinta kaas oo ku lug leh wareejinta elektarooniga u dhexeeya laba noocyada. Erayada fudud, PQQ wuxuu isku xiraa quinoproteins-ka jirka ku jira wuxuuna lashaqeeyaa iskaashi si looga takhaluso xag-jiryada xorta ah. Daraasad cilmi baaris ah ayaa lagu ogaaday quinoproteins inay 100 jeer ka waxtar badan tahay Vitamin - C oo ah anti-oxidant. Daraasadihii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in PQQ uu saameynayo wareejinta tamarta iyo dheef-shiid kiimikaadka iyadoo la kordhinayo tirada guud ee mitochondria ee jirka dhexdiisa. Waa xaqiiqooyinkan muhiimka ah ee sababay kicinta lama filaanka ah ee caannimada Pyrroloquinoline quinone sanadihii la soo dhaafay.
Muxuu qabtaa pyrroloquinoline quinone?
Marka laga soo tago inuu yahay cunsur koritaanka dhirta iyo bakteeriyada cofactor, pyrroloquinoline quinone (PQQ) wuxuu ka ilaaliyaa mitokondria cadaadiska oksaydhka wuxuuna kobciyaa mitochondriogenesis.
Immisa PQQ ah ayaad qaadaneysaa maalin kasta?
Illaa iyo hadda xaddidan xadka ama ka hooseeya lama goyn Quinone Pyrroloquinoline (PQQ) qiyaasta. Si kastaba ha noqotee, natiijooyinka laga soo qaatay daraasaadka xayawaanka ayaa muujinaya in dhismahan uu noqonayo mid firfircoon marka la qaato qiyaaso yar sida 2 mg. Si kastaba ha noqotee, inta badan nafaqada dheeraadka ah ee maalmahan waxaa laga heli karaa inta u dhaxeysa 20 mg ilaa 40 mg, taas oo loo arko inay tahay nooc badbaado leh. PQQ badanaa waxaa lagu heli karaa qaab kaabsol ah, oo dadka lagula taliyo inay qaataan calool madhan. Si kastaba ha noqotee, dadka isticmaala waxaa lagula talinayaa inaysan dhaafin xaddiga 80 mg maalintii.
Goorma ayaan qaataa CoQ10 subax ama habeen?
Waa in la ogaadaa in qaadashada CoQ10 ee ku dhow wakhtiga jiifka ay sababi karto hurdo la'aan dadka qaarkood, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in la qaato subaxdii ama galabtii (41). Daawooyinka CoQ10 waxay la falgeli karaan qaar ka mid ah daawooyinka caadiga ah, oo ay ku jiraan khafiifiyeyaasha dhiigga, dawooyinka lidka diiqadda iyo dawooyinka kimoterabiga
Muxuu Q u taagan yahay CoQ10?
Coenzyme Q10 (CoQ10) waa antioxidant jirkaagu soo saaro si dabiici ah. Unugyadaadu waxay u isticmaalaan CoQ10 koritaanka iyo dayactirka.
Sidee mitochondria loo soo nooleyn karaa?
Iyada oo laga jawaabayo dhiirrigelinta, mitochondria waxaa lagu maraa wareegyo isku-darka / kala-baxa si loola qabsado deegaanka. Sidaas awgeed waa macquul in la qiimeeyo in baaxadda firfircoonida mitochondrial looga baahan yahay dib-u-cusbooneysiinta neerfaha.
CoQ10 miyuu ku jiraa quinine?
Coenzyme Q10 waxaa iska leh qoys ka kooban walxo loo yaqaan ubiquinones kuwaas oo qaab dhismeed ahaan ula xiriira kiimikada quinine. Haddii aad hubto inaad xasaasiyad ku leedahay quinine, waa inaad la hadashaa dhakhtarkaaga ka hor intaadan bilaabin kaabista maalinlaha ah ee CoQ10.
Maxay quinine uga saareen suuqa?
Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA) ayaa amar ku bixiyay in meesha laga saaro daawooyinka aan la ansixin ee ay ku jiraan quinine, iyadoo loo aaneynayo walaac daran oo xagga amaanka ah iyo dhimasho la xiriirta isticmaalkooda. Ficilku wuxuu qayb ka yahay dadaal ballaaran oo looga saarayo dhammaan suuqyada daroogooyinka aan aaminka ahayn, ee aan la oggolaan.
Waa maxay qaabka ugu fiican ee coenzyme Q10?
Ubiquinol wuxuu u dhigmaa 90% CoQ10 dhiiga waana qaabka ugu nuugista badan. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad ka doorato waxyaabo dheeri ah oo ku jira qaabka ubiquinol
Muxuu Co Q 10 u sameeyaa jirka?
CoQ10 ayaa loo muujiyey inay gacan ka geysaneyso hagaajinta caafimaadka wadnaha iyo xakameynta sonkorta dhiigga, ka caawinta ka hortagga iyo daaweynta kansarka iyo yareynta inta jeer ee dhanjafka. Waxay sidoo kale yareyn kartaa dhaawaca oksida ee keena daalka murqaha, dhaawaca maqaarka iyo cudurada maskaxda iyo sanbabada.
PQQ miyuu ka gudbaa caqabadda maskaxda?
Soobixid Pyrroloquinoline quinone (PQQ), haddii kale loo yaqaan methoxatin, waa biyo lagu milmi karo, ordokonone redox-cycling markii hore laga soocay dhaqamada bakteeriyada methylotropic. Waxay u muuqataa in xayawaanka oo dhan, si kastaba ha noqotee, PQQ uusan ka tallaabin caqabadda maskaxda-dhiigga.
Maxaan Ugu Baahanahay Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)?
Markay dadku da 'noqdaan, maskaxdooda ayaa ku qasbaysa inay la dagaallamaan ilaha kala duwan ee waxyeellada leh. Inkasta oo ilaha waxyeellada qaarkood ay diiwaangelinayaan eber illaa saameynta ugu yar ee maskaxda bini'aadamka, waxyeelada qaarkood ayaa noqda qayb wax ku ool u leh cilladaha neerfaha iyo dhaawacyada horumarka leh ee saameeya xididdada dhiigga. Sanadihii la soo dhaafay, dadku waxay aad uga walaacsanaayeen caafimaadka maskaxda sidaas awgeed, cilmi baarista, iyo sidoo kale ka warqabka howlaha maskaxda iyo caafimaadka, ayaa si weyn u xoogeystay. Cilmi baarayaashu waxay si isdaba joog ah u wadaan daraasado si ay u darsaan una falanqeeyaan saameynta kiimikooyinka iyo iskudhafka kaladuwan ee caafimaadka maskaxda aadanaha. Mid ka mid ah waxyaabaha noocan oo kale ah oo soo jiitay xiisaha cilmi-baarayaasha iyo saynisyahannada adduunka oo dhan waa Pyrroloquinoline Quinone (PQQ). Maqaalkani, waxaan ka wada hadalnay wax walba oo laga ogaan karo Pyrroloquinoline Quinone, oo ay ku jiraan shaqadiisa, faa'iidooyinka, xaddidaadda qiyaasta iyo dhibaatooyinka soo raaca. Marka, aqri.
Yaree soo-gaadhista sunta. Bixi nafaqooyin ka difaaca mitirka 'mitochondria' cadaadiska oksida.
Ka faa'iideyso nafaqooyinka fududeeya soosaarka ATP ee mitokondria.
Miyaad kordhin kartaa mitochondria?
Jimicsiga jirka waa habka ugu wanaagsan ee lagu kordhin karo qaadashada oksijiinta, taas oo muhiim u ah wareegga mitokondria ee Krebs. Maaddaama jirkaagu uu adeegsado tamar badan, waxay isku qasbi doontaa inay soo saarto mitochondria badan si ay ula socoto baahida.
PQQ ma quinine baa?
Pyrroloquinoline quinine, oo sidoo kale loo yaqaan PQQ, waa isku-duwaha 'redox' iyo 'polyphenolic compound' oo badanaa laga helo dhirta cuntada. Waxaa laga helaa cytoplasm-ka unugyada waxayna ka caawisaa yareynta falcelinta iyo oksaydhka.
Waa maxay quinine si dabiici ah looga helaa?
Quinine waa shey qadhaadh oo ka soo baxa jilifta geedka cinchona. Geedka waxaa inta badan laga helaa Koonfurta Ameerika, Bartamaha Ameerika, jasiiradaha Kareebiyaanka, iyo qaybo ka mid ah xeebta galbeed ee Afrika. Quinine waxaa markii hore loo soo saaray daawo lagula dagaallamo duumada.
Muxuu u taagan yahay Pyrroloquinoline Quinone saltdium salt (PQQ)?
Su'aalaha kahor-u-qalmitaanka (PQQ, oo mararka qaar loogu yeero su'aalaha qiimeynta alaab-qeybiye) wuxuu dejiyaa su'aalo taxane ah oo loogu talagalay hindise-bixiyeyaasha ka soo jawaabaya oo la xiriira heerka khibradooda, awooddooda iyo maaliyadooda
Waa maxay faraqa u dhexeeya coQ10 iyo ubiquinol?
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) waa quinone biyo-ku milma oo leh awood anti-oxidant xoog leh. Daraasad hore oo ku saabsan jiirka ayaa la quudiyay cunto PQQ-yaraatay ayaa muujisay in heerarka sare ee serum triglyceride (TG) uu hoos u dhacay ka dib markii la kordhiyay PQQ.
PQQ ma nabad qabaa?
Daraasad la sameeyay ilaa iyo hada waxay xaqiijisay in PQQ jirku sifiican ugu dulqaadanayo marka lagu qaado xadka loo cayimay. Si kastaba ha noqotee, inaad dhaafto qiyaasta daawada loo qoro waxay kuu horseedi kartaa waxyeelooyin, sida madax xanuun, daal, iyo hurdo yaraan. Sidaa darteed, isticmaaleyaasha waxaa lagula talinayaa inay ku dhegaan qiyaasta aaminka ah ee 40 mg maalin kasta oo aysan ka badneyn qiyaasta 80 mg. Waxaa taas ka sii muhiimsan, in kasta oo PQQ loo yaqaanay inuu si fiican ugu dulqaadanayo jirku, waxaa ugu wanaagsan inaad la tashid dhakhtar ka hor intaadan bilaabin qaadashadaada haddii aad wax shuruudood hore ugu xiran tahay.
Miyuu PQQ ka fiican yahay CoQ10?
CoQ10 waa sida supercharger-ka oo hagaajiya xawaaraha tareenka. PQQ waxay lamid tahay shirkad dhisme oo had iyo jeer ka shaqeysa sidii ay tareenkaaga ugu dari lahayd gawaari dheeri ah. Isku soo wada duuboo, CoQ10 wuxuu hagaajiyaa xawaaraha tareenkaaga wax soo saarka tamarta, halka PQQ ay kudareyso oo ay dhiseyso awood dheeri ah oo tareenkaaga ah.
Immisa CoQ10 ah ayaan qaataa?
Ma jiro qiyaasta ugu habboon ee loo yaqaan 'CoQ10'. Daraasaduhu waxay isticmaaleen qaddarro CoQ10 ah oo ka bilaabma 50 milligram ilaa 1,200 miligram oo dadka waaweyn ah, mararka qaarkoodna waxay u kala baxaan dhowr qiyaasood maalintiiba. Qiyaasta caadiga ah ee maalinlaha ah waa 100 milligram ilaa 200 milligram.
Miyuu CoQ10 sababaa xinjirowga dhiigga?
Anticoagulants. CoQ10 waxay samayn kartaa dawooyinka khafiifiya dhiiga, sida warfarin (Jantoven), oo aan waxtar lahayn. Tani waxay kordhin kartaa halista xinjirowga dhiigga.
Muxuu Q10 qaali u yahay?
Marka, markaa, Q10 wuxuu ka gudbaa dhiigga unugyada iyo unugyada, waxaa dib loogu celiyaa qaab-dhismeedkiisa tamarta, ubiquinone. Foomka ubiquinol ee Q10 aad buu u deggan yahay, sidaa awgeedna, aad ayuu uga qaalisan yahay soo-saaraha kaabsalka Q10 inuu la shaqeeyo.
Mudo intee le'eg ayuu CoQ10 qaadanayaa inuu shaqeeyo?
Maaddaama heerarka Ubiquinol ay bilaabayaan in lagu soo celiyo dhiigga dhiigga, dad badan waa inay arkaan astaamaha daalka oo yaraaday maalintii shanaad ka dib markay billaabeen kaabista. Caadi ahaan laba illaa saddex toddobaad gudahood, qaddarka jirka ee Ubiquinol ayaa gaari doona heerarka ugu wanaagsan, qaar badanna waxay dareemi doonaan kala duwanaansho xagga tamarta ah waqtigan gudahood.
Waa maxay dhibaatooyinka soo raaca ee qaadashada CoQ10?
Kaabayaasha 'CoQ10' waxay umuuqdaan kuwo amni ah waxayna soo saaraan waxyeellooyin yar markii loo qaato sida lagu faray.
Dhibaatooyinka fudud ee fudud waxaa ka mid noqon kara dhibaatooyinka dheef-shiidka sida:
Xanuunka caloosha sare
Waxyeellooyinka kale ee suurtagalka ah waxaa ka mid noqon kara:
Cuncunka maqaarka ama finanka
Xanaaq ama kacsan
Badbaadada isticmaalka CoQ10 muddada uurka iyo naas nuujinta lama xaqiijin. Ha isticmaalin CoQ10 haddii aad uur leedahay ama aad naas nuujinayso adiga oo aan dhakhtarkaagu oggolaan.
Pyrroloquinoline quinone ma la mid yahay quinine?
Pyrroloquinoline quinine, oo sidoo kale loo yaqaan PQQ, waa isku-duwaha 'redox' iyo 'polyphenolic compound' oo badanaa laga helo dhirta cuntada. PQQ waa loo cuni karaa iyada oo ah kaabis cunto si looga caawiyo wax soo saarka tamarta gacanta iyo caafimaadka mitochondrial iyo in jirka laga difaaco culeyska oksida.
PQQ ma u roon yahay qalbiga?
Nafaqada Quwada leh ee PQQ waxay kahortagi kartaa wadnaha oo fashilma. Nooc cilmi baaris caafimaad oo cusub, oo lagu daabacay daabacaaddii ugu dambeysay ee Baaritaanka Wadnaha & Daaweynta Wadnaha, ayaa lagu soo gabagabeynayaa in nafaqada lagama maarmaanka ah ee Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) ay door ka ciyaari karto ka hortagga wadnaha oo aan shaqeyn (CHF).
Ma qaadan kartaa PQQ inta aad uurka leedahay?
Natiijooyinkayagu waxay soo jeedinayaan in kaabista PQQ, gaar ahaan xilliga uurka iyo nuujinta, ay ka ilaalinayso farac ka socda barnaamijyada horumarinta ee WD-ku soo kordhay ee xinjirowga cagaarshowga oo laga yaabo inay gacan ka geysato yareynta cudurka faafa ee NAFLD ee jiilka soo socda.
PQQ ma u badbaado u yahay macaanka?
Dhibaatooyinkaan ka hortagga sonkorowga ee 'PQQ' waxaa taageeray astaamaha antioxidative-ka, maadaama PQQ kaliya aysan hor istaagin unugyada LPO laakiin ay sidoo kale xoojisay insulin-ta serum-ka iyo HDL, iyo sidoo kale antioxidants-ka gacanta.
Sideed u tamartaa mitokondria?
10 Dariiqo oo lagu Kordhiyo Mitochondria-kaaga
Cun kaloori ka yar.
Qaadashada PQQ Cuntada dheeriga ah.
Iska tuur kaarboonka la sifeeyay sida soodhaha, rootiga cad iyo keega.
Cun borotiin tayo leh sida hilibka lo'da ee cawska lagu quudiyo iyo ukunta daaqsinka leh
Mudnaanta siiya helitaanka 8 saacadood oo hurdo ah habeen kasta.
Iska yaree walbahaarka farsamooyinka nasashada sida fikirka ama duugista maalin kasta.
Isku day daaweynta kuleylka.
Samee ugu yaraan 30 daqiiqo oo dhaqdhaqaaq ah maalin kasta.
Ku cun cuntooyinka hodanka ku ah antioxidant-ka leh resveratrol sida shukulaatada madow.
Cun ilaha omega-3s iyo alfa-lipoic acid.
Waa maxay antioxidant PQQ?
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) waa sheeko-yaqaan cusub oo dhowaan la helay caanaha aadanaha. PQQ wuxuu ahaa antioxidant wax ku ool ah oo ka ilaaliya mitochondria ka hortagga oksidheer-ku-kicinta lipid peroxidation, sameynta kaarboon-kaylylka iyo firfircoonida silsiladda mitokondria ee neefsashada.
Waa maxay fitamiin PQQ?
PQQ waa dhisme dabiici ah oo laga helo cuntooyin kala duwan. Waxay u shaqeysaa sidii antioxidant waxayna taageertaa shaqada mitochondrial caafimaad qabta. Waxaa loo qaatay kaabis si kor loogu qaado shaqada maskaxda.
Waa maxay PQQ 20?
Pyrroloquinoline quinone ama PQQ waa shey fiitamiin u eg oo dhowaan la helay kaas oo inta badan laga helo cuntooyinka dhirta. Waxaa markii ugu horreysay la ogaaday inuu yahay cofactor ee bakteeriyada taas oo la mid ah sida Faytamiin B ay u saameeyaan aadanaha. PQQ waxay leedahay firfircoonida antioxidant iyo B-vitamin-u eg, oo leh faa iidooyin kala duwan oo maskaxda iyo jirka ah.
Cunto noocee ah ayaa ka kooban PQQ?
Waxaad u badan tahay inaad wax yar cuntid PQQ maalin kasta. Waxaa laga helaa qadar yar oo ah cuntooyin badan sida isbinaajka, basbaaska cagaaran, kiwifruit, tofu, natto (soybeeda la kariyey), shaaha cagaaran, iyo caanaha dadka. Si kastaba ha noqotee, guud ahaan kama helno wax badan oo PQQ cuntada - kaliya qiyaastii 0.1 ilaa 1.0 milligram (mg) maalintii.
Cunnadee ayaa kordhiya mitokondria?
Qaar ka mid ah nafaqooyinkaan muhiimka ah waxaa ka mid ah L-carnitine iyo creatine, oo labaduba muhiim u ah bixinta tamarta mitokondria. Waxaad ka heli kartaa wax badan labadaba adoo ku daraya hilibka lo'da cawska, bisinka, ukunta, digaaga, digirta, lowska, iyo iniinaha cuntadaada.
Soonka miyuu kordhiyaa mitokondria?
Daraasadu waxay ogaatay in soonku uu wanaajiyo isuduwidda mitochondrial ee peroxisomes, oo ah nooc ka mid ah unugyada jirka ee kordhin kara oksaydhka asiidhka dufanka leh, oo ah habka dheef-shiid kiimikaadka aasaasiga ah
Layli noocee ah ayaa kordhiya mitochondria?
Daraasad cusub ayaa lagu ogaaday in jimicsiga - iyo gaar ahaan tababbarka u dhexeeya xoogga jimicsiga jimicsiga sida baaskiil wadista iyo socodka - ay keeneen unugyo inay u sameeyaan borotiinno badan tamarta ay soo saaraan ee mitochondria iyo ribosomes-ka ay ku dhisaan borotiinka, iyagoo si wax ku ool ah u joojiya gabowga heerka unugyada. .
Ma hagaajin kartaa mitochondria waxyeello gaadhay?
Waxaa la go'aamiyay in si looga hortago waxyeellada, mitochondria waxay leedahay dariiqooyin dayactir oo si fiican loo qeexay oo la mid ah kuwa nukleus, kuwaas oo ay ka mid yihiin: dayactirka salka aasaasiga ah (BER), dayactir la'aanta (MMR), dayactirka jebinta hal-jeex (SSBR), ku biirista dhamaadka microhomology-dhexdhexaadinta (MMEJ), iyo malaha isku-soo-celinta isku midnimada.
Maxaa dheeri ah oo kordhiya mitochondria?
Kaabisyada dabiiciga ah ee afka laga qaato oo ay kujiraan xuub fosfooliid, CoQ10, microencapsulated NADH, l-carnitine, α-lipoic acid, iyo nafaqooyin kale ayaa gacan ka geysan kara dib u soo celinta shaqadii mitokondria iyo yaraynta daalka aan laga soo kaban karin ee bukaanada qaba cudurada daba dheeraada
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) Adeegsadaa.
Quinone Pyrroloquinoline (PQQ) ayaa markii hore loo haystay inuu yahay fiitamiin. Si kastaba ha noqotee, cilmi-baaris dheeri ah ayaa loo aasaasay iyada oo ah isku-darka fiitamiin-la'aanta ah ee ku dhaca cuntada iyo sidoo kale unugyada naasleyda. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la muujiyo in kasta oo cilmi-baaris aan lagu xaqiijinin isku-dhafka naas-nuujinta, qiyaastii 100-400 nanogram of PQQ ayaa lagu sameeyaa jirka bini-aadamka maalin kasta. Nasiib darrose, qaddarkan kuma filna in lagu taageero howlaha kala duwan ee PQQ lagu caddeeyey inay qabato. Sidaa darteed, bini-aadamka waxaa badanaa lagula taliyaa inuu u cuno PQQ qaab kaabis cunto ah.
Cunno la'aanta ka jirta PQQ kaliya maahan waxay horseedaysaa hoos u dhac koritaanka laakiin waxay sidoo kale yareynaysaa shaqada galmada. Sidoo kale, daraasado dhowr ah ayaa PQQ xiriir la leh koritaanka iyo biogenesis mitochondrial. Erayada fudud, jidhka bini-aadamka ayaa ka faa'iideysan kara PQQ maaddaama ay kor u qaadayso tirada iyo shaqada mitochondria, taas oo horseedaysa heerar tamar wanaagsan. PQQ waxaa sidoo kale loo yaqaanaa inuu yahay wakiilka REDOX aad u fiican wuxuuna ka hortagaa is-dilidda iyo isku-xidhka polymerization.
Faa'iidooyinka Pyrroloquinoline Quinone (PQQ).
Xiisaha Pyrroloquinoline Quinone ayaa si aad ah u kordhay sanadihii ugu dambeeyay maadaama dhismahan lala xiriiriyay faa'iidooyin dhowr ah. Halkan, waxaan eegeynaa faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee Pyrroloquinoline Quinone (PQQ).
① PQQ waxaa lala xiriiriyay tamar guud oo hagaagsan
Mitochondria waa unugyo yaryar oo ka dhexjira unugyada waxaana badanaa loogu yeeraa guryaha awooda unugyada maadama ay tamarta ka sii daayaan cuntada, taas oo keeneysa tamarta unugyadu u baahan yihiin si ay shaqadooda u gutaan. Pyrroloquinoline Quinone waxay u oggolaaneysaa mitochondria inay si fiican u shaqeyso, taas oo keeneysa kororka wax soo saarka tamarta gudaha unugyada. Tamartaani waxay ku kordhisay unugyada ugu dambeyntiina waxay heleysaa jidkeeda jirka oo dhan, taas oo keenta adkeysi iyo tamar guud. Haddii aad inta badan la kulanto caajis ama tamar hoose, kaabayaasha PQQ ayaa kaa caawin doona inaad sare u qaaddo heerarka tamartaada. (1) La daabacay: Saamaynta Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
② Waxay hagaajisaa cunsuriyada kobaca dareemayaasha
Pyrroloquinoline Quinone wuxuu la falgalaa wadiiqooyinka gacanta iyo geedi socodka, si is beddel la’aan ah ayuu u saameeyaa isirrada koritaanka neerfaha. Tani, markeeda, waxay u horseedaa kor uqaadid horumarineed ee unugyada neerfaha iyo neerfaha ee unugyada cranial. Sidaa darteed, PQQ wuxuu badanaa ku xiran yahay hagaajinta shaqada maskaxda. Maaddaama NGF dysregulation ay badanaa la xiriirto cudurka Alzheimers, kaabisyada PQQ ayaa badanaa loo qoraa si looga caawiyo daaweynta xaaladaha da'da la xiriira.
Qaadashada ③PQQ waxaa lala xiriiriyay hurdo soo hagaagtay
Daraasad ayaa lagu falanqeeyay saameynta qaadashada PQQ ee hurdada dadka. Daraasada ayaa lagu lafa guray kaqeybgalayaasha mudo sideed todobaad ah waxaana lagu ogaaday in kuwa sida joogtada ah wax u cuna sideed usbuuc ay awoodaan inay sifiican u seexdaan. Daraasadda ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in qaadashada PQQ ay yareyneyso cortisol, hormoonka walaaca ee hakad geliya hurdada caadiga ah. In kasta oo cilmi-baaris dheeraad ah looga baahan yahay aaggan gaarka ah, cilmi-baaris hordhac ah waxay si cad ugu xireysaa qaadashada PQQ hurdo fiican.
④ PQQ wuxuu kobciyaa Guud ahaantaada Fayoobaanta iyadoo layareynayo Stress Oxidative
PQQ waxaa loo yaqaanaa astaamaha anti-oxidant-ka sare - waxay hoos u dhigeysaa heerka borotiinka C-falcelinta iyo IL-6 jirka dhexdiisa, labaduba waxay mas'uul ka yihiin caabuq. Astaamaheeda oksidheer ayaa sidoo kale ka dhigaya PQQ dagaalyahan wax ku ool ah oo ka soo horjeeda cadaadiska oksida, taas oo ah sababaha ugu badan ee cuduro badan oo daba dheeraada, sida kansarka iyo cudurada neerfaha. PQQ wuxuu yareeyaa buuqa iyadoo yareyneysa dhaawaca oksidheer ee ay sababaan xagjirnimada lacag la’aanta ah iyo xoojinta dheef-shiid kiimikaadka.
PQQ ee Isku-darka CoQ10 wuxuu hagaajiyaa Waxqabadka Xusuusta
Qaadashada PQQ waxay la xiriirtay hoos u dhaca culeyska maskaxda, taas oo iyaduna, u horseedaysa kor u qaadista shaqada garashada iyo hagaajinta xusuusta. Daraasado cilmi baaris ayaa loo sameeyay si loo barto sida PQQ u saameeyo xusuusta. Daraasad cilmi baaris ah ayaa lagu ogaaday in PQQ ay lashaqeyso CoQ10, coenzyme oo u shaqeysa sidii antioxidant kor u qaada dheef-shiid kiimikaadka isla markaana ka ilaaliya unugyada waxyeellada. PQQ oo lagu daro CoQ10 ayaa muujisay inay hagaajineyso howlaha xusuusta.
Faa'iidooyinka kale ee PQQ
Wixii ka sareeya iyo ka sareeya dheefaha kor ku xusan, PQQ waxay kaloo bixisaa xoogaa faa'iidooyin kale ah cilmi baarista hadda socota. Tusaale ahaan, daraasad horudhac ah ayaa caddaysay in qaadashada PQQ ay sidoo kale u horseedo dhalmo hagaagsan.
Xagee laga iibsan karaa Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) Powder in Bulk?
Haddii aad tahay soo-saare kaabitaan caafimaad oo ku lug leh wax-soo-saarka Pyrroloquinoline Quinone oo ballaaran, waxaa iska cad inaad tahay inaad raadsato alaab-qeybiye alaab cadaan ah oo ku siin kara budada PQQ badan. Helitaanka alaab-qeybiye lagu kalsoonaan karo tayada iyo isku hallaynta ayaa fure u ah aasaasida ganacsi guuleysta.
Haddii aad raadinayso in iibso Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) budada ku badan, meesha ugu fiican ee wax laga iibsado waa Cofttek. Cofttek waa shirkad tiknoolajiyad dawooyin sare oo kiimiko ah oo la aasaasay sanadkii 2008 waxayna ku shaqeysaa mabda'a "Aasaaska Tayada, Macaamiisha Koowaad, Adeeg Daacadnimo, Macaash Dheer". Shirkaddu waxay u heellan tahay tijaabinta saxda ah, taas oo u oggolaanaysa iyada inay siiso adeegyo iyo alaab tayo sare leh macaamiisheeda. Cofttek waxay hada waxsoosaarkeeda siisaa shirkadaha dawooyinka ee Shiinaha, Yurub, Hindiya iyo Waqooyiga Ameerika. Budada PQQ ee ay soo bandhigtay shirkaddu waxay ku yimaadaan qaybo ka mid ah 25 kiilogaraam, taas oo ku filan in lagu soo saaro qaybo badan oo ka mid ah alaabtaada. Muhiimad ahaan, Cofttek waxay leedahay koox khibrad maamul leh iyo koox heerka koowaad ah R & D. Sidaa darteed, waad nasan kartaa inaad ka heli doonto dhammaan keenistaada alaabooyin tayo sare leh oo heer sare ah oo ku habboon qaab waqtigeeda ku habboon. Haddii aad raadineyso inaad iibsato Pyrroloquinoline Quinone oo badan, la xiriir kooxda adeegga cofttek.
(1) La daabacay:Saameynta Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) Kordhinta Waxqabadka Jimicsiga Aerobic iyo Tusmooyinka Mitochondrial Biogenesis ee Ragga aan la barin
(2) Saamaynta neuroprotective ee pyrroloquinoline quinone ee dhaawaca maskaxda
(3) Horumarkii ugu dambeeyay ee daraasadaha ku saabsan faa'iidooyinka caafimaad ee pyrroloquinoline quinone
(4) Saameynta Kaabista Antioxidant Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt (BioPQQ ™) ee Waxqabadka Garashada
(5) Qufulone-ka Pyrroloquinoline
(13) 5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada fosfatidylserine (ps).
Waan jeclahay pqq. Waxaan u isticmaali jiray ku dhowaad 2yrs. Aniga ahaan waxay xoojisaa tamarta. Maaha qaab xamaasad leh laakiin guud ahaan kor u qaadista waxqabadka maskaxda iyo tamarta jirka. Waxaan u isticmaalaa maalin kasta 10 ama 20 mg w 100mg ubiquinol. Waan kugula talinayaa.
Waxaan qaataa 40 mg maalintii. Tamarteydu waa mid joogto ah maalintii oo dhan, waxaanan dareemayaa inay wax ku biirinayso tayadayda weyn ee hurdada oo ay weheliso ashwagandha, magnesium, iyo l-theanine.
Pyrroloquinoline Quinone ayaa lagu xusay daraasad ku saabsan sida looga bogsado qulqulka. Waxay kicisaa biogenesis ee mitochondria cusub waxayna la midoobaysaa CoQ10 hagaajinta unugyada. Waxaan dareemayaa farqi weyn oo xagga tamarta ah iyo mararka qaarkood niyadda markaan qaato.